Fit AS Apk Download Ho an'ny Android  - Luso Gamer
Fit AS Apk Download Ho an'ny Android 
Febroary 25, 2022 Janoary 12, 2022 by Làlana Shweta
Androany isika dia hiresaka lohahevitra mifandraika amin'ny fanatanjahan-tena ary koa lalao izay nalaza taona vitsivitsy lasa izay. Nizara fampiharana fantatra amin'ny anarana hoe "Fit AS" aho ?? ho an'ny telefaona finday sy tablette Android.
Izy io dia fampiharana tena mahavariana izay azon'ny olona ampiasaina amin'ny telefaona azy. Ankoatr'izay, dia fampiharana mahasoa sy mahery izay mitaky sy miasa amin'ny alàlan'ny fifandraisanao GPS.
Ka ao amin'ny lahatsoratra anio, dia hizara ny fampahalalana fototra momba ny fampiharana izay halefa ity lahatsoratra ity aho. Nozaraiko eto ny kinova farany ain'ny fampiharana raha toa ka mila ilay tranainy tranainao azonao angatahina izany ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra, hanome izany ihany koa izahay.
Fa ny antony fizarana ireo dikan-teny vaovao ihany dia ny manome ny rindranasa izay miasa ary manolotra ireo endri-javatra rehetra. Fanampin'izay, tsy mandeha amin'ny telefaona ireo dikan-taloha taloha.
Na izany aza, raha mbola mila ny dikan-ny teo aloha amin'ity fampiharana ity na lalao amin'ny tranokalanay ianao dia afaka mangataka izany amin'ny hevitra na amin'ny mailaka.
Holazaiko aminao ny momba izany sy ny fomba fampiasana azy na ny fomba fiasa izany. Noho izany, manoro hevitra anao aho hamaky ity lahatsoratra ity mandra-pahatongan'ny farany mba tsy hisian'ireo fampahalalana manan-danja.
Momba ny kitapo Fi
Androany aho dia nizara ny Fitas Apk ho an'ny Android saingy ny anarana ofisialy dia Fit AS. Azo alaina ao amin'ny Play Store ihany koa izy io fa raha ny mahasoa anao kosa dia nizara izany eto. Izy io dia fampiharana izay azo ampiasaina ho an'ny tanjona fitsaboana.
Mandritra ny fandehanana na ny fihazakazahana dia mila manana tantara momba ny hazo ianao mba hahitanao ny fotoana nandehanan'ny dianao.
Saingy araka ny fantatrareo fa tsy azontsika atao ny mitondra gadona elektronika mavesatra sy goavana harahina izany. Noho izany, afaka manana safidy amin'ny fitondrana Smartphone na finday ihany ianao. Izany no antony ahafahanao mametraka ity rindran-tsary ity amin'ny telefaona finday ary mandiso ny làlan-jotra efa niasa fotsiny.
Ity fampiharana mahagaga ity dia natomboka tamin'ny 25 Desambra 2018 ho an'ny fitaovana Android. Natao ary namboarin'ny HypEarth. Hatramin'ny nanombohana azy dia niampita takelaka dimy alina.
anarana Mifanaraka AS
Anaran'ny fonosana com.hypearth.flibble.app
Fitas PokÃ © mon Go
Araka ny filazan'ny olona maro izay nampiasa ilay fampiharana tamin'ny findainy dia nizara ny zavatra niainany momba ny Fitas PokÃ © mon Go.
Midika izany fa azonao atao ny mampiasa ny FIT AS ho an'ity lalao PokÃ © mon malaza amin'ny Internet ity. Amin'ny ankapobeny, ity fampiasa amin'ny Fit AS ity dia ahafahan'ny mpilalao mampifandray ny lalao sy mamaky ireo angona azo avy aminy.
Noho izany, azonao atao ny milaza fa mampifanaraka ny angona misy eo amin'ireo rindranasa amin'ny findainao izy io. Na izany aza, misy fampiharana maro hafa mifandraika amin'ny fahasalamana azonao ampiasaina mba hampifanarahana ireo dingana amin'ny PokÃ © mon.
Saingy ny olona dia mankasitraka ity fampiharana ity ho an'ny tanjon'izany, izany no antony hanolorako anao hampiakatra an'io ho an'ny findainao.
Ahoana ny fampiasana Fit AS App ho an'ny PokÃ © mon Go?
FIT AS App dia fitaovana mahaliana miaraka amin'ny fahaiza-manao maromaro. Amin'ny lafiny iray, azonao atao ny manasalama ny fahasalamanao sy ny fanatanjahantena, fa amin'ny lafiny hafa azonao ampiasaina amin'ny famandrihana miaraka amin'ny lalao.
Noho izany, ho an'ireo izay tsy mahalala ny fomba hampiasany azy amin'ny lalao dia afaka manamarina ity dingana ity amin'ny fitarihana dingana. Manantena aho fa hanampy anao hampiasa azy io araka ny tokony ho izy.
Voalohany indrindra, alao ary apetraka ny App AS AS Fit.
Avy eo, ampidiro ny FITAS ary manomboka fanavaozana vaovao miaraka amin'ny Google Fit App.
Arotsaho avy eo ity rindranasa zaraiko ity amin'ity lahatsoratra ity.
Ankehitriny, tsindrio ny bokotra Stop.
Asehony izao ny hafatry ny habetsahan'ny KM fa tsy maintsy hiasa hatrany ianao.
Azonao atao koa ny mahita fomba hafa noho izany satria misy fomba maro hafa mampifanaraka ilay lalao miaraka amin'ity fampiharana ity.
Ao dia afaka manana safidy bebe kokoa ianao eny an-tsena amin'ny tanjona iray ihany. Saingy mbola manoro hevitra anao aho haka an'io an-dry io satria fampiharana maimaim-poana io ary azonao ampiasaina maimaim-poana.
Noho izany, misintaha ny kinova farany Fit AS Apk ho an'ny Android. Tsindrio ny bokotra download eto dia hanomboka hitahiry ny rakitra Apk amin'ny fitaovanao izy rehefa hatao izany avy eo.
Sokajy Apps, Fahasalamana & Fitness Tags Mifanaraka AS, Mifanaraka AS Apk, Mifanaraka AS App, FitAS Apk Post Fikarohana
Chums Live Apk 2022 Download Ho an'ny Android
Razer Gold Apk Download Ho an'ny Android 